प्रयोग गरिएका यस्ता सामाग्री सडकमा फालेपछि बाटो हिँड्ने ६५ मा देखियो कोरोनाको लक्षण, कसले गर्यो यस्तो लापरबाही ? — Sanchar Kendra
प्रयोग गरिएका यस्ता सामाग्री सडकमा फालेपछि बाटो हिँड्ने ६५ मा देखियो कोरोनाको लक्षण, कसले गर्यो यस्तो लापरबाही ?
एजेन्सी । विश्वभरका मानबजातिको लागि ठुलो चुनौती भएको कोरना भाइरसले अहिले नेपालमा ठुलै सन्त्रास पैदा गरेको छ । यसको नेपालको छिमेकी राष्ट्र भारतमा पनि ठुलो हलचल नै मच्चाएको छ ।
चीनको वुहानबाट सुरु भएको कोरोना भाइरसको संक्रमण विश्वका २१० देशमा फैलिदा यसको संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या १ लाख ७७ हजार ६१२ पुगिसकेको छ । भने २५ लाख ५६ हजार ५४८ जना संक्रमित भएका छन्। विश्वको दोस्रोबढी जनसंख्या भएको मुलुक भारतमा पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिएका कारण लकडाउनको घोषणा गरिएको छ।
लामै लकडाउन झेलेका भारतीयहरुले लकडाउनको पालना गर्न त्यति सजिलै सकेको देखिदैन । भारतीय संचारमाध्यमा अहिले पनि रेल्वेस्टेशनमा हजारौको भिड लागेकै समाचार प्रकाशन प्रशारण गरेका छन् । यसै क्रममा भारतको पश्चिम बंगालमा प्रयोग गरिएका पीपीई (व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण) र किट ठूलो संख्यामा एक होटल बाहिर बाटोमा भेटिएपछि हंगामा मच्चिएका छ।
जहाँ पीपीई किट भेटिएका थिए, त्यहाँ नजिकै रहेको एक होटल छ। जसलाई प्रशासनले क्यारेन्टाइन बनाएको थियो। तारापीठ मन्दिरको आसपास कोरोना संक्रमणको आशंका रहेका व्यक्तिको परीक्षण गरिएको थियो।
डाक्टरले उक्त समय उपयोग गरेका पीपीई र किट बाटोमा बेवारिसे छोडिदिए। जसका कारण त्यहाँ आसपास रहेका मानिस र बाटोमा हिड्ने व्यक्तिमा कोरोनाको लक्षण देखिएपछि स्थानीयले विरोध गरेका छन्। कोरोनाको लक्षण देखिएपछि ६५ जनालाई आइसोलेशनमा भर्ना गरिएको छ। ती मध्ये धेरै मानिस प्रवासी मजदूर रहेका छन्।